बाबुराम र प्रचण्ड फेरी एकै पार्टीमा ? यसरि हुदैछ सम्भव — Sanchar Kendra
बाबुराम र प्रचण्ड फेरी एकै पार्टीमा ? यसरि हुदैछ सम्भव
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता हुने भएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको श्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी एकता भए जनयुद्धका मुख्य योजनाकार पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्टराई एउटै पार्टिमा रहने सभांबना बढेको छ । पार्टी एकीकरण गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएपछि यसको सम्भावना झन बढेको हो ।